Warar kala duwan oo ka soo baxaya Duqayn ka dhacday Gobolka Jubbada Dhexe - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home News Warar kala duwan oo ka soo baxaya Duqayn ka dhacday Gobolka...
Warar kala duwan oo ka soo baxaya Duqayn ka dhacday Gobolka Jubbada Dhexe
Faah faahin kasoo baxeysa duqeymo xoogan oo goordhow ka dhcey deegaano hoostaga Gobolada shabeellaha hoose iyo Jubbada dhexe kuwaas oo lala bartilmaameed sanaayey horjoogayaal sare oo katirsan dagaalamayaasha alshabaab.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Duqeymo Xoogan oo la sheegay iney ka dhaceen deegaano katirsan Gobolada Sh/hoose iyo Jubbada dhexe.
Saraal katirssn Sirdoonka Qaranka ayaa Warbaahinta u sheegay in la Duqeeyay Deegaanada kala ah Hargeysa-yarey, Degamada Saakow iyo Deegaano udhaxeeya Jilib iyo Bu’ale iyo Deegaanka Sablaale.
Sidoo kale wuxuu sheegay Degmada Saakow in lagu Duqeeyay Xarun ciidamada Shabaab sanad u talay Xaro weyn oo lagu keydin jirey hubka fudud iyo rasaasta.
Ugu dambeyntii Sarkaalka ayaa sheegay Duqeyn ka dhacday degaanka Sablaale oo katirsan Gobolka Shabeelada hoose in lagu bartilmaameedsaday Gaadiidka dagaal oo ay lahaayeen Alshabaab kuwaas oo u qaab ekaa gawaarida ay isticmaasho AMISOM.
Previous articleBaaritaano ka socda Magaalada Boosaaso ka dib dil Xalay Magaaladaa ka dhacay
Next articleWasiiro ka tirsan Xukuumada Xasan cali Khayre oo la sheegay in ay Al-shabaab yihiin